Danaystayaal ka horjeeda danta umada soomaaliyeed | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Danaystayaal ka horjeeda danta umada soomaaliyeed
Danaystayaal ka horjeeda danta umada soomaaliyeed
Puntland waxaa dagan beelo soomaaliyeed,oo hore uugu he shiiyay in ay dhistaan maamul kadib markay burburtay dawladii dhexe ee soomaaliyeed 1991dii. u jeedkuna wuxuu ahaa in dadku helaan maamul ku dhisan sinaan iyo cadaalad beelaha dhexdooda ah inta laga helaayo dawlad soomaaliyeed oo hanata shacabka deegaanada Puntland.
Hadafka uugu waynina ee lagu heshiiyay wuxuu ahaa in la baadi goobo dib u yagleelka dawlad soomaaliyeed oo dib u curada marlabaad si dalku uuga baxo dawlad la aanta. labadaa heshiis labadaba waa lalaalay oo la jabiyay,iyadoo xukunkii ay fara maroojisteen jifo kamid ah majeerteen oo lagu sheego maxamuud saleebaan. waxayna halkii beeluhu usinaan lahaayeen ka dhigteen meel u xiran iyaga uun!! waxaa intaa dheer xoogaagii dhaqaalaha ahaa ee canshuurta shacabkana jeebkay gashadeen.Siweyn bay uuga xun yihiin beelwaynta majeerteen oo gobta ahi ficilada ugubka ah ee jifadu arlada ku fasaadisay.
laga soobilaabo 1998 oo la aas aasay puntland waxa kursigaa fadhiyay oo isku badalanaayay waa halkaa jifo oo kaliya waxayna isu badashay Puntland hooy dulmi iyo cadaalad daro tasoo awal shacabka Puntland ogaayeen hadana soomaali oo dhami dareentay dulmigaa gaamuray.
1998 laga soo bilaabo ilaa maanta oo ah 2020 wax hormar ah oo dan guud ah oo ay samaysay ama gaartay Puntland majirto mana jiro hal iskool oo ay dhistay mudadaas aadka u dheer. jifadu xoogaagaa gaalo bixisay iyo cashuurta shacabka ayay halkaa ku qaybsanaayeen ilaa hada sida idiin muu qataba. taasi waxay marqaadi cad u tahay sida ay uuga aradan yihiin maamul wanaag iyo hormar oo ay san u garanayn xirfad maamul iyo maarayn waana faashil iyo fadhiid aan socod baran.SHACABKA Puntland AYAA YIRAAHDA IYAGA OO UUGU MAAH MAAHA “MEESHA KAMA TAGE WAXSE KUMA TARE” kursiga waa uun fadhiyaan oo xirteen laakiin wax qabad malaha!
khiyaanada labaad waa mida ku wajahan dawlad soomaaliyeed oo lataageero heshiiskii taageero waa kabaxeen oo waxay u arkaan in soomaaliya oo dawlad yeelata shaqaysaa,ay keenayso sinaan dalka ka dhacda iyagoo ka cabsaday in ay waayaan dhaqaalaha ay hada heleen oo ah midkaa canshuurta iyo kan haydaha gaalo siiyaan iyo dawladha shisheeye ee ay u adeegaan sida E-maraatka iyo Kenya.
Majecla in ay hana qaado dawlad soomaaliyeed,mana doonayaan in MOGDISHO yeelato madaxweyne shaqeeya iyo dawladnimo sidii ay ahaan jirtay oo laga xukumo soomaaliya. waxayna curyaamiyeen MOGDISHO xiliyadii ay ka ahaayeen raysal wasaarayaasha sida xiligii CUMAR CABDIRASHIID IYO CABDIWALI GAAS oo ahaa kuwo lahayray nabdii mogdisho iyo dawladnimadii soomaaliyeed intaba.
Kolkaa Puntland way khiyaameeyeen,soomaalina waa khiyaameeyeen taasoo hada soo afjarantay. cajabay noqotay in ay wali quudaraynayaan in waxay u barteen usii socdo waa siday latahay ee!!! waxay hada ku hayaan shacabkii Puntland xarig iyo caga juglayn iyo caburin,iyagoo udiidan in ay ka qayb qaataan doorashada qaranka soomaaliyeed ku dooranaayo madaxweyne sanadka 2021, si xor iyo xalaal ah oo dadku codaynayaan. waxayna doonayaan in ay afduubaan siday hore uugu soo ceesheenba oo codka dadka iyagu soo qortaan oo iib geeyaan, madoonayaan wax siman iyo cod xor ah in uu dalka ka dhaco.
waxay lacag aad ubadan oo dawlado shisheeye usoo mariyaan ku bixiyaan sidii shacabka MOGDISHO loo kicin lahaa oo dawlada hada jirta looga hortagi lahaa,si markaa MOGDISHO loo ragaadiyo oo dib loogu celiyo qaabkii tuugaysi ee shriif iyo xasan taasoo u ah dan iyaga siday u arkaan. hadana xasan sheekh iyo shariif waxay ku leeyihiin saamayn siyaasadeed oo laga wada dharagsan yahay.
Waxay isku dayayaan waxaysan heli karin oo ah,in ay carqaladeeyaan hanaanka iyo geedi socodka doorasho oo dawlada soomaaliyeed madaxtooyo iyo xukuumad iyo gudi doorasho iyo labada aqalba isku raaceen ee la meel mariyay shacabka soomaaliyeedna degmo iyo gobol iyo caasimada dalkeena ee MOGDISHO intaba ay soo dhaweeyeen oo sugayaan. iyagu madoonayaan in shacabku xor noqdo oo codeeyo maxaayeelay cidooranaysaa majirto waayo dalkaan lagu aamini karayn waana halis cad.
shacabka Puntland waa arkaan sababta uu isii yahay wali DANI madaxweyne maamulkaas isagoo baarlamanka hortiisa suaal xildhibaan waydiiyay,ka carooday oo intuu caytamay isagoon idin haysan iska baxay baarlamaankii oo jawaab la xisaabtan ah kasugaaya! madaxweyne masuul ah xaq umalaha in uu iska baxo,sharciguna wuxuu dhigayaa in baarlamaanku ka xayuubiyo xilka silamarkaaba. laakiin halkaa kaga samir in meesha jirin hab maamul oo ay leedahay Puntland dawladnimo warkeedba daayoo. macnuhu waa jifo meesha ku habstay oo kaliya waxba majiraan dhab ahaan. Haday wax jiraan Dani madaxweyne maha ficilkuu sameeyay daritiis.
Waad aragtaan oo hada nooc waali ah ayayba maraysaa,gudoomiyihii baarlamanka wuu cayriyay waayo? wuxuu kashakiyay in uu dawlada dhexe taageersan yahay!! mid uu is yiri waad ku shaqasan kartaa yuu keensaday isagiina hada waa kashakisan yahay! waxaa intaa kasii dartayba madaxweyne ku xigeenkii ayuu ka shakiyay,odayaal ayaa faracaradood kaga fujiyay wuxuu ku haystaa dawlada dhexe ayaad taageersantahay!
wasiiradii wuu isku badalay qaarna kuxigeeno oo isagu keensaday ayuu daba dhigay waa shakisan yahay.siyaasiyiintii iyo aqoon yahanadii iyo culimadii diinta iyo odayaashii iyo shacabkii Puntland looma ogola in ay xor yihiin oo dawladooda dhexe taageeraan oo MOGDISHO taageeraan yaabka la arkay. isaga iyo Gaas iyo Ina cabdirashiid oo dubay u fadhiya waxay beecinayaan karaamada iyo masiirka shacabka Puntland. waase midan dhacayn oo cid kayeelaysaa jirin.
Yaabka reer Puntland iyo Soomaali arkeen waxaa kamid ah,lacagtii dawlada dhexe waa ka guranayaan oo soo dhaweynayaan oo waatii hada lasiiyay halmalyan oo kaash ah,kolkaa wixii dhaqaalo ah waa rabaan laakiin wixii dawladnimo ah marabaan!!. tan layska yeelimaayo dawlada dhexe ee soomaaliyeed ee fadaraalka ahi way caawisay shacabka Puntland waana ku mahad santahay. waana kaxunahay in caawimaadii dawlada dhexe bixisay hore iyo hadaba aysan gaarin masaakiintii loogu tala galay,balse guryo lagu dhistay caruurna dibada loogu dhoof saday oo waxbarasho loogu dirsaday. nasiib daro weeye kuwii sidaa yeelay in ay ka hadlaan dawlad soomaaliyeed iyo MOGDISHO.
Buulkaan yaroo Dani ka dhex samaystay si uu ukala dilaalo dawlada dhexe iyo shacabka Puntland maha mid soconaaya shacabkuna xaqa waa arkaan dawlad bayna haystaan ay ku kalsoon yihiin fadhigeeduna MOGDISHO yahay. isla hadalkan ku yimid Dani waxaad ku garataan iyo in uu siyaasadii iska xajin wayay oo ciir ciiraayo xubnihii Puntland kasoo jeeday ee aqalka sare iyo golaha shacabka ayuu ku yiri amar waaye hada kasoo baxa hadii kale jagada waa idinka qaadaa dadkale ayaan keensanaa!! soomaali waa aragtaa in fayoobaan jirin masuuliyiintii Puntland ee fadaraalku waa ku qosleen oo codsadeen in ninkaan gurmad caafimaad dibada loogu diro intuusan dhardhigan!!
WaalIda Dani iyo dhigteeytarnimadiisa kuwani waa gudi doorasho ee Puntland heer dulmi laga gaaray!
Dani isagoon baarlamaan iyo gole wasiiro midna latashan wuxuu jeebkiisa si iskii ah u soo qortay koox jifadiisa ah marka laga reebo labo qof oo kaliya mooyee,isagoo isu diyaarinaaya in kursigu jifada dhaafin siday xeeriyeen,ayuu soo qortay kuwakan. kooxdan oo u shaqaysa hada isaga oo shacabka Puntland layaaban yihiin ayaa usoo diyaariyay kooxo uu samaystay oo ah ururo siyaasadeed oo ay u diiwan galiyeen. wuxuuna doonayaa in waxaas uu inooga dhigo xisbi,waxaana ka dhaadhiciyay fikirkaas ina cabdirashiid sharmaarke oo yiri jifadu sidan kuma sii fadhin karto,u ekeeysii qaab xisbi taasaa hada socota dr gaas ayaa isna fikirkan ku raacsan oo qayb ka ah.
Ninka waxaa samaynayaa isma arko soomaaliyeey,kaasaa eedaynaaya dawladaa dhexe ee soomaaliyeed ee MOGDISHO fadhigeedu yahay yaabka la arkay isaguna isuma jeedo heerka qabyaalad iyo eex iyo dawlad diidnimo ee uu kusuganyahay.
shacabka soomaaliyeed guud ahaan maanta waa baraarugay waana ka soo daaleen qabyaalad iyo dawlad la aan nin jeclaysi iyo kooxaysi,dawlad bay haystaan dhexe oo ay raacsan yihiin wax kasokeeya dawladaa dhexe cid u baahan majirto dibna loo laaban maayo. doorashadana 2021 way dhacaysaa nin ka hor imankaraana majro kii isku dayana ogaada hadaba nama eer san karo isagaa isdilay. axdi illaahay iyo balan baan hore uugu dhaaranay oo u galay in aanaan sii dhawran mid ka hor imanaaya danta DIINTA DADKA IYO DALKA SOOMAALIYA.MID KA HOR IMAANAYA SINAANTA CADAALADA UMADA SOOMAALIYEED.
Previous articleMadaxweyne Jabuuti oo Faah faahin ka bixiyey Wada Hadalada Soomaliya iyo Soomaliland
Next articleFanaaniinta Soomalida oo ku kala qeybsamay heysta Waayaha Cusub ee Nabar iyo Naxtin
Beesha Caalamka oo ka hadashay wadahadalada Soomaliya iyo Soomaliland
Madaxweyne Waare oo Amray in aan lagu Qaban Karin Baladweyne...